warkii.com » Kangana Ranaut: &ldquo;Ram Leela iyo Bajirao Mastani waxaa Sushant Singh Rajput u diiday Aditya Chopra&rdquo;&hellip; (& jawaabta ay bixisay markii caddeynta la weydiiyay)
Kangana Ranaut: &ldquo;Ram Leela iyo Bajirao Mastani waxaa Sushant Singh Rajput u diiday Aditya Chopra&rdquo;&hellip; (& jawaabta ay bixisay markii caddeynta la weydiiyay)
Is dilkii Sushant Singh Rajput waxa uu saldhig u noqday dagaal sokeeye oo ka dhex billawday Bollywood-ka, iyado filim sameeyayaasha ugu awoodda badan India ay la kulmayaan eedeymo ku aaddan inay xiddigan u gacmo qabteen xiddigaha qoysaska ku leh Bollywood-ka.
Atariishada carrabka adag ee Kangana Ranaut ayaa dusha kaga tuurtay shirkadda Yash Raj Films inay masuul ka tahay qalbi jabka ku yimid Sushant, sidoo kalena ay xirfaddiisa baabi’iyeen, taasoo ugu dambeyn sababtay inuu nolosha ka quusto.
Kangana ayaa sheegtay in heshiiskii Sushant uu kula jiray Yash Raj oo ka hor taagnaa inuu la saxiixdo mashruucyo kale oo waaweyn kuwaasoo sare u qaadi lahaa maqaamkiisa atoorennimo.
“Aditya Chopra waxa uu lahaa wakiillo wanaagsan kuwaasoo kasoo shaqeeyay heshiisyada ay la saxiixdeen Ranveer Singh iyo Sushant Singh Rajput oo dhowaan-gal ah. [Sanjay Leela] Bhansali wuxuu askarta u caddeeyay inuu Sushant raadinayay shan sano. Balse heshiiska uu kala jiray YRF ayaa ahaa mid XUN, waxbana ma sameyn kartid iyagoo aadan la tashan oo aadan ka fasax qaadanin” ayay Kangana ku sheegtay wareysi ay siisay Republic TV.
Waxay hadalkeeda kusii dartay in shirkadda uu madaxda ka yahay Aditya Chopra ee YRF ay Sushant heshiiskiisa gacanta ugu dhigeen si aysan shirkad kale filim ugu soo bandhigin, iyagan ay hoggaanka u hayaan mihnaddiisa.
Ugu dambeyn, waxaa atariishadan la weydiiyay caddeynta ay u heyso dooddeeda ku qotonta in shirkadda Yash Raj Films ay burburisay waayaha Sushant, waxaana ay jawaab kaga dhigtay in filim-sameeye Sanjay Leela Bhansali uu xogtaas ku sheegay wareysigii uu siiyay booliska magaalada Mumbai intii ay socotay baarista kiiskii is dilka ahaa ee Sushant.
Kangana ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqday in Aditya Chopra xitaa uusan ceymin jirin qasaarooyinka soo gaara Sushant Singh Rajput.